संविधानसभाबाट मात्र संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने होइन :: दिवाकर पन्त, राजनीतिक विश्लेषक – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १५:४६ English
संविधानसभाबाट मात्र संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने होइन :: दिवाकर पन्त, राजनीतिक विश्लेषक
० नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
– विदेशमा रहँदा पनि पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियामार्फत नेपालको राजनीतिबारे बुझिरहेकै हुन्थेँ । अहिले स्वदेशमै रहँदा राजनीति झन् नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिलेको छ । पछिल्लो राजनीति हेर्दा आशा जगाउनेभन्दा घटनाक्रमहरू कता–कता निराशा बढाउने नै पाएको छु । हुन त निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी भइरहेको दाबी गरिरहेको छ । चुनावका लागि केही काम भइरहेको पनि होला । तर, जुन रूपमा काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी प्रक्रिया अघिबढेझैँ लाग्दैन । निर्वाचनको कुरा त सबैले गरिरहेका छन्, तर अन्तरहृदयदेखि सोअनुरूपको व्यवहार कसैको पाइएको छैन । एउटा राष्ट्रको संविधान बनाउने विषयलाई आवधिक चुनाव गर्नेजस्तो सोचले काम गर्नु उन्नत भविष्यको द्योतक हुन सक्दैन । सम्पूर्ण तह–तप्काका जनताको आवाज मुखरित हुनुपर्ने, राष्ट्रलाई दीर्घकालसम्म दिशानिर्देश गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज निर्माण गर्ने विषयलाई यसरी ठट्टाको विषय बनाउन नहुने हो राजनीतिक दलका नेताहरूले । उनीहरूको व्यवहार हेर्दा ‘ठट्टा’ नै गरिरहेझैँ लाग्छ । भन्ने नै हो भने चुनावका लागि भनेर जुन रूपको सरकार बनाउने निर्णय चार दलले गरे, त्यतिबेलै मलाई त शङ्का लागेको थियो कि यो के गरिँदै छ ? निकास होइन देशलाई अन्योलतिर लैजाने खेल नै यो रहेछ भन्ने लाग्न थालेको छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थाबाट मचाहिँ अलिक चिन्तित नै छु ।
० यसको मतलब निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ भन्नेमा तपाईंलाई विश्वास कम छ या विश्वास नै छैन, हो ?
– हो । निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ भन्नेमा त मलाई एकदमै कम विश्वास छ । किनभने, आशाप्रद रूपमा प्रगति भएकै छैन यो प्रक्रिया ।
० चुनाव हुने सम्भावना कम हुनुको खास कारण के होला त ?
– मुख्य कारण त पहिलेको संविधानसभा किन असफल भयो भन्ने कारणको खोजी नै नगरी अर्को संविधानसभा चुनावको डङ्का पिटिएको छ । त्यो कारण खोजेको भए सच्चिएर–सुधारेर अघि बढ्न सकिन्थ्यो, जनतामा विश्वास बढ्थ्यो, जसले चुनावको सुनिश्चितता बढाउँदथ्यो । सोच, शैली, प्रवृत्ति सबै पुरानै बोकेर नयाँ चुनावको चिच्याहट यसै पनि नसुहाउने विषय बनेको छ । विवादित कुराहरू जहीँको त्यहीँ छन् । आ–आफ्ना हठ र अडानहरू छेडिएकै छैनन् । यसले निर्वाचनको तिथि नजिक हुँदै जाँदा विवादहरू चर्काएर निर्वाचन खलबल्याउने सम्भावना बढाएको छ ।
० नेकपा–माओवादीले चुनाव बिथोल्ने वा बहिष्कार गर्ने भनिरहेको छ, योचाहिँ चुनाव हुन नसक्ने कारण बन्न सक्दैन ?
– मोहन वैद्यजीहरूले उठाउनुभएको एजेन्डा सम्पूर्ण रूपले बेठीक भन्न मिल्ने ठाउँ छैन । जनताको आवाज पनि त्यसमा मुखरित भएको म पाउँछु । यसरी जनआवाज या जनइच्छासहितको माग कसैले उठाइरहेको छ भने त्यसलाई चुनाव हुन नदिनका लागि भाँजो हालिएको भन्ने अर्थमा कतिसम्म लिने– बहसको विषय हो । चार दलले आफूले मनखुसी निर्णय गरेर अरूमाथि लाद्ने जो प्रवृत्ति देखाए, यसप्रति असन्तुष्टिका आवाज उठ्नु अस्वाभाविक छैन । चार दलको यो रवैया प्रजातान्त्रिक मर्मको विपरीत पनि छ । यसरी अहिलेको सरकार जो बनेको छ, यसैमा पनि त सबैको सहमति लिने प्रयास गर्न त सकिन्थ्यो होला नि, सुरुमा । तर, गरिएन । पेलेर जान खोजे उनीहरू । झट्ट हेदा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले मात्र यो आवाज उठाएको देखिए पनि सचेत वा बुद्धिजीवीहरू, प्रजातन्त्रवादीहरूले पनि यो आवाजमा आवाज मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । तथापि, बहिष्कार भन्ने कुराचाहिँ राम्रो कुरा होइन । जे भए पनि चुनाव नहुने कारणका रूपमा माओवादीलाई लिने कुरा सतही हुन्छ, गुह्य कारकतत्त्व त चार दलहरू नै हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । सबैलाई नसमेटीकन गराउने चुनाव त परिणाममुखी हुन सक्दैन नि !
० वैद्य पक्षले सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने, पहिले नै संविधानका एजेन्डाहरूमा सहमति हुनुपर्ने र विज्ञहरूको समूहबाट संविधान बनाएर संसद्मार्फत त्यसलाई पारित गर्नुपर्नेजस्ता कुराहरू अगाडि सारेको छ, यी सब कुरालाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
– यतिबेला राष्ट्र ठूलो क्राइसिसमा भएकोले राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य बनेको छ । सम्पूर्ण दल र जनताको तह–तप्काका त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुने गरी बृहत् छलफल या सम्मेलन हुनु यसर्थ जरुरी नै देखिन्छ । आजसम्म गरिएका अनेक प्रयोगहरू नेपालको राजनीतिमा असफल बन्न पुगेकाले सर्वपक्षीय सम्मेलन एउटा आशाको केन्द्र बन्न सक्छ । विगतमा संविधानसभा पनि असफल भएकाले संविधान बनाउने बाटो संविधानसभा मात्रै हो भनी मान्न सकिन्न, यसको पनि विकल्प हुन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याइनु असान्दर्भिक हुँदैन । यो मोडेल मात्रै संविधान बनाउनका लागि सर्वोत्तम मोडेल हो, अरू मोडेल कामै छैन भन्न मिल्दैन । त्यसैले यस्ता कुरामा निक्र्योल लिनका लागि पनि एकपटक सबै तहका जनताको सहभागिता हुने बृहत् सम्मेलन सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । वैद्यपक्षको भनाइ या माग सान्दर्भिक नै छ, बेठीक छ भन्न म त सक्दिनँ ।
० वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई पूर्ण रूपमा असफल नेतृत्व भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होला ?
– पूर्ण असफल नभएको भए दुई वर्षको संविधानसभालाई चार वर्ष तन्काएर पनि संविधान बनाउन किन नसकेको त ? प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफूहरूमध्येबाटै सरकार निर्माण गर्न दलहरूले किनकिन नसकेका त ? नेपालका राजनीतिक दलहरू असफल भएकै हुन् ।
१५ श्रावण २०७०, मंगलवार १६:३९ मा प्रकाशित